AKHRISO: 3-Arrin oo keeneyso in dib u eegis lagu sameeyo RW Kheyre iyo Xukuumadiisa… | Allbanaadir News	AKHRISO: 3-Arrin oo keeneyso in dib u eegis lagu sameeyo RW Kheyre iyo Xukuumadiisa…
AKHRISO: 3-Arrin oo keeneyso in dib u eegis lagu sameeyo RW Kheyre iyo Xukuumadiisa…
Mudanayaal iyo Marwooyin si walba ooaad ku timaadeen hadey ahaan laheyd Muruq, Maskax iyo Maal waxaad tihiinXildhibaanadii Qaranka Soomaliyeed, waxaan si buuxda maqsuud idiinkaganoqonay markii aad doorateenMadaxweyne Maxamed Cabdilaahi farmaajo oo aan nagu cusbeyn.
Dhibaatooyinku Mudanayaal iyo Marwooyin waa is dabayaal maalinba maalinta ka dambeysa, dadkii aad wakiilka ka aheydeen nolol ma haystaan oo nabad ma haystaan, caafimaadna ma heystaan, su’aashu waxay tahay sidee lagu noolaanayaa oo aad nagu meteleysaan haddii aydaan noo qareemin?.
Mudanayaal iyo Marwooyin waxaad la socotaan hadalkii uu jeediyey Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo yiri. “Waxaan ku jirna go’doon ee halanaka soo gaaro”. waxaad kaloo ogtihiin in gudiga doorashooyinka Qaranku ay Balcad ku tageen diyaarad siay dadka halkaas ku nool u soo wacyigeliyaan. Sidoo kale jowhar diyaarad ayaa lagutagaa, waxayna wararka qaar sheegayaan ineyba soo xirantahay wadada xiriirisa Xamariyo Jowhar kadib markii ay shabaab Todobadkii hore sacado kooban la wareegeen intabadan gacan ku heynta Magaalada Balcad.
Mudanayaal iyo Marwooyin iyadoo ay caadi tahay dilka ka dhaca Magalada Muqdisho ooloo geysto dadka rayidka ah iyo ciidamada ayaa hadana wadada xiriirisa Xamar iyo Afgooye xaalkeedu aanu fiicneyn oo waxaa khadyaan laga taagan yahay Miinooyin ay Shababku dhigeen, iyadoo la ogyahay Geeridii Masuuliyiintii Hirshabeelle iyo Koofur
Galabeed ee ka dhacday nawaaxiga Wanlaweyn ayaa hadana waxaa doraad galab miino lamiga lagu aasay ku geeriyoodey ku dhowaad 10 askari oo katirsan Ciidanka Milatarga gaar ahaan kuwa ay tababareen Imaaraadka Carabta waxaana intaas dheer in habeen madow lagu aasay qabuuraha Iskuul buluusiya, marka Mudanayaal iyo Marwooyin Amaan ma jiro.
Mudanayaal iyo Marwooyin si loo noolaado waxaa muhiim ah in wax cuno, waa sidee xaalku hadda? Maciishaddii waa ay adkaatay oo waxaa lasoo qaban la’yahay nolol maalmeedkii caadaiga ahaa, shaxaad ma jiro, sababtoo ah waxaa batay shaqo la’antii ka jirtey Magaaladda.
Iyadoo sidaasi jirto oo ay dalkan dhibaato ku hayaan Ganacsato gowracato ah ayaa Wasaradda Maaliyaddu waxay soo rogtaa maalin kasta Canshuur hor leh oo aan weligeed Soomaaliya lagu arag, taasoo dhibaato ku noqneysa hadii la meel mariyo dadweynihii hore u dhibanaa gaar ahaan kuwa ku nool Xamar iyo Gobolda la ologga ah, sidaa darteed Mudanayaal iyo Marwooyin nololi ma jirto.
Mudanayaal iyo Marwooyin, dalka Soomaliya oo ay Caasimadu ugu weyn tahay waxaa laga la’yahay daawo tayo leh si loogu dabiibo dadka xanuunsan. Tusaale, Shalay waxaa Magaalada Muqdisho laga soo weriyey geeriga sedax qof oo hal qoys ka soo jeeda iyo dhaaawca intii kale ee qoyska ka hartay marka Hooyaddii laga reebo. Maxay aheyd sababtu? Sababtu waxay aheyd qoyskaas waxaa ku batay cudurka Duumada ama Malaariyadda, waa ay ku soo noqnoqtay, waxay waayeen daawo ay isaga dabar gooyaan, waxay la daalaadhacyeen dhowr sano oo is xigxigey . Qoyskaas markii dambe waxaa helay Turufatoor (dhakhtar u eke) waxa uu u sheegay in Malariyada lagula tacaalo Geed
waxaa intaas dheer Mudanayaal iyo Marwooyin daawo la’aanta Soomaaliya ka jirta waxay sababtay in Haweenkii infection¬ka qabay hadda daawo ahaan loo siiyo oo ay cunaan Geedka Diisiga, markii ay waayeen daawooyin ay kula tacaalaan infaction¬ka wareeriyey marka Mudanayaal iyo Marwooyin Caafimaad ma jiro.